Migunaa Miguunaa: mormituu beekamaa Keeniyaa ammas biyyaa baafaman - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Miguunaan yaalii ammas Keeniyaa galuuf godhaniin jalqaba torbee kanaarratti hidhaman.
Keeniyaatti miseensa mormituu kan ta'an Migunaa Migunaa, 'reebichaa fi summeeffamuun' yeroo lammataaf biyya ari'aman.
Manni murtii biyyatti irra deddeebi'ee Miguunaan akka biyyatti deebi'u murteessuufis, murticha cabsuun ari'atamuunsaa barameera.
Murtii kenname kabajanii Miguunaa gadi lakkisuu diduun, ajaja mana murtii kabajuu dhabuudha jechuun manni murtichaa qondaaloota olaanoo biyyatti gafatamoo tasisseera.
Wiixata irra jalqabe bakka itti hidhamanii turan buufata xiyyaaraa Naayiroobi irraa xiyyaara Emireetsiin biyyatti keessa akka bahanis abukaatoonni Miguunaa mirkaneessaniiru.
Xiyyaara gara Duubaayitti balali'u akka deeman hubatameera.
''Na summeessanii, na reebuun, lafarra na harkisuun, gara Dubaayitti humnaan na hari'aniiru,'' jechuun Miguunaan fuula Facebook isaanirra maxxansan.
Kana malees ''Dubaayittiin of bare,'' jedhu.
Ogeessa seeraa, mormituu fi haasaa isaaniin kan beekaman Miguunaan, biyya baatii darbe keessa itti aari'amanii deeman Kaanaadaa irraa as deebi'anii Keeniyaa galuuf yaalii godhan booda ture qabamanii kan hidhaman.
Miguunaa yoo gadi lakkisuu didan, ministirri dhimma biyya keessaa, itti gaafatamaan polisiifi itti gaafatamaan dhimma godaansaa, ajaja mana murtiin kename daddarbuun itti gaafatamu jechuun abbaan murtii mana murtii olaanaa Keeniyaa Joorj Oduungaa dubbataniiru.
Hogganaa mormituu kan ta'an Raayilaa Odiingaa ''pirezidaantii uummataa'' jechuun deggeertoota isaanii duratti sirna kakuu raawwatan irratti qooda qabaaniin ture kanaan dura qondaaloonni Keeniyaa biyya keessa kan isaan ari'an.
Qondaalonni kunis Miguunaan lammii Kaanaadaa malee lammummaa Keeniyaa hin qabani jedhu.
Filannoo Hagayya waggaa darbee irratti hin filatamiin kan hafan Odingaan, boodarra akkaataan filannoo sun rakkoo qaba jedhamee akka irra deebi'amu murtaa'uun ni yaadatama.
Kana boodas, filannoon irra deebii kun hatamee pirezidant Uhuruu Keenyaataaf kenamuuf deema jechuun filanno keessaa of baasan.
Jalqaba baati kanarratti hoggantoonni siyaasaa lamaan waliin ta'uun televiziyoonii irratti dhihaachuun deemsa araaraa akka jalqaban dubbatanii turan.
Morkitoonni Keniyaa lamaan haraaraa buufachuuf
Obbo Miguunaan mana fincaanii keessatti akka hidhamaniifi maatiin isaaniis deemani akka hin gaaffanne dhorkamu Kibxata darbe BBC'tti himanii turan.
Uhuruu Kenyaataa fi Raayilaa Odingaan haraara busuuf
9 Bitooteessa 2018
Filannoo Keeniyaa: Sirni waadaa galuu Keeniyaattaa haala nageenyaa cimaan
Itoophiyaan 'daangaa ce’uun haleellaa taasifteef' Sudaan deebii gaafatte
Itoophiyaatti lakkoofsi namoota Covid-19'n qabamanii 1,000 caale
Astiranootonni US imala seena-qabeessa gara hawaatti eegalan
Ilmi mootii Beeljiyeem paartii erga dhaqee booda Covid-19n qabame
Magaalotni US hokkora ka'e tasgabbeessuuf sochii daangessan
Maayikrosooft 'gaazexessitota roobotiidhaan bakka busuuf'
Balaaleffannaan ajjeechaa Filooyid Waayiit Haawusiin cufsiise
Oromiyaatti haalli shakkamtootni Covid-19 itti tursiifaman maal fakkaata?